၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံကစလို့ … မန်ဒဲလား သေသွားတဲ့နေ့အထိ (KThwe) | MoeMaKa Burmese News & Media
၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံကစလို့ … မန်ဒဲလား သေသွားတဲ့နေ့အထိ
ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၃
တကယ်တော့ အဲဒီပွဲမှာ သမီးက ဘာမှ တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်မူတော့ မရှိပါဘူး။ သမီးရဲ့ ဆရာက မြန်မာပြည်ကနေ ဖိတ်ထားတဲ့ ဧည့်သည် သုံးယောက်အတွက် လာပြီး ကူညီပေးနိုင်မလား လို့ ဆိုတော့ ၊ အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ၊ တကူးတကနဲ့ကို သမီးတို့ နေတဲ့ မြို့ကနေ ကီလိုမီတာ ၆၀၀ ကျော် ဝေးတဲ့ ပါ့သ်မြို့ ကြီး ကို အရောက် သွား ခဲ့တာလေ ။ ပြီးတော့ ဒီပွဲ ရဲ့ ခေါင်းစဉ် အကြောင်းရင်းတွေက သမီး လတ်တလော သိပ် စိတ်ဝင်စားနေ တဲ့ Industrial Relation လို့ ဘာသာရပ်နာမယ် တပ်ထားတဲ့ အလုပ်သမား အရေး သမဂ္ဂအရေး တွေ လေ။ ဒီပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ အဖွဲ့က Southern Initiative on Globalization and Trade Union Rights (SIGTUR) လို့ သိထားပေမဲ့ ၊ အင်တာနက်ကနေ သူတို့ ၀ဘ်ဆိုဒ်ကို ၀င်ကြည့်တော့လည်း ဘာမှ သိပ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိလှဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်တင်အမေရိက နိုင်ငံတချို့ အပါအ၀င် တောင်ကမ္ဘာခြမ်းက နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ လောက်က သမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တွေ လာပြီး ဆွေးနွေးနှီးနှောကြမှာ ဆိုတာ နဲ့ တင် ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းလှပြီ ။ မြန်မာပြည်က ဧည့်သည် သုံးယောက်ကတော့ ညကြီး မှောင်မှောင် ပါ့သ်မြို့ကြီးထဲကို ရောက်ရောက်ခြင်း သူတို့ တည်းခိုနေထိုင်ရမဲ့ မြို့စွန် ပင်လယ်ကမ်းစပ်က တောအုပ်ဝင်းကျယ် ကြီးကို မြင်ပြီး စိတ်ပျက်သွားကြပုံပဲ ။ နိုင်ငံခြားမှာ ကွန်ဖရန့်စ် တက်ရမယ် ဆိုတော့ ဟိုတယ်ကောင်းကောင်း တခုတော့ ဖြစ်မှာပဲလို့ ထင်ခြင်ထင်ကြမယ်လေ။ တကယ်တော့ တပတ်လုံးလုံး လုပ်မဲ့ ကွန်ဖရန့်စ် အတွက်၊ ဖရီမန်တဲ ကမ်းခြေ ကို မေးတင်ထားတဲ့ ဒီ တောအုပ် စခန်းသာလေးက တော်တော့်ကို သာယာပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နဲ့ အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ပတ်ပတ်လည်မှာ ကျေးငှက်သံတွေ စိုးစီ နေတဲ့ ကြားမှာ လေးခန်းတွဲ အိပ်ဆောင် လေးတွေကိုလည်း ဒေသခံ ငှက်မျိုးရင်းတွေရဲ့ နာမယ်တွေ ပေးထားတယ်။ အဲဒီ အဆောင်လေးတွေကနေ အောက်ဖက်ကို နည်းနည်းလေး ဆင်းလိုက်တာနဲ့ ပင်လယ်ကဗွီးလို အပင်ရှည်ကြီးတွေရဲ့ အလယ်မှာ ထမင်းစားဆောင် ၊ အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင် ၊ ဆွေးနွေးခန်းငယ် လေးတွေ လုပ်ထားတော့ လာသမျှ ဧည့်သည်တွေ အားလုံး နွေးနွေးထွေးထွေး နဲ့ ရင်းနှီးမူ လည်း ပိုရခဲ့ကြတယ် ။ နွေးထွေးသလားတော့ မမေးနဲ့ ။ ၂ ထပ် အိပ်စင် ၂လုံးပါတဲ့ အခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ မမာမာဦး နဲ့ မစုစုနွေးက တစင် ၊ သမီး နဲ့ မအိရွှေစင် က တစင် အိပ်ကြရတော့ ၊ ညရောက်ရင် သံကုတင်တွေ နဲ့ အပြိုင် လေးယောက်သား တကျွိကျွိ နဲ့ စကား တွတ်ထိုး ကြတာလေ။ နေ့လည်ဖက်က ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက သူတို့ သိချင်တာတွေ သမီးက ပြန်ရှင်းပြ ပြီးရင်တော့ သူတို့ အလှည့်ပေါ့ ။ သိတဲ့ အတိုင်း သူတို့ သုံးယောက် စလုံးက မြန်မာပြည်က နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြသလို အဖွဲ့ချုပ်လို ၊ ၈၈ ပွင့်လင်း လို အဖွဲ့ အစည်းကြီးတွေ နဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင် ထိစပ်နေကြတဲ့ သူတွေ ဆိုတော့ ၊ သူတို့ ဆီကလည်း အများကြီး လေ့လာပြီး အမြင်ဖလှယ်ခွင့် ရခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ ။ ရောက်ရောက်ခြင်း ညကတော့ ခပ်မဆိတ်ပဲ ရှိနေကြသေးတော့ ၊ သူတို့ ရန်ကုန်က ယူလာတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ထဲက ၊ ၁၃၀၀ပြည့် အရေးတော်ပုံ စိန်ရတု အခမ်းအနား နှိုးဆော်စာရွက်ကလေးကို လှန်လျော ကြည့်ရင်း မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေး အခြေအနေ အငွေ့အသက်တွေကို မသိမသာ ရှု ရှိုက်ကြည့်နေ မိ ခဲ့တယ် ။ သူတို့တွေ သြစတြေလျကနေ ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ အမီ ချောက် ရေနံမြေက ၁၃၀၀ပြည့် စိန်ရတု အခမ်းအနားကို ဆင်းကြမယ်ဆိုပြီး၊ သူ့ အစီအစဉ် ကိုယ့်အစီအစဉ် ပြောနေကြတာကို အပေါ်ကုတင်ကနေ အသာနားထောင်ရင်း ဖေဖေ ဆိုလေ့ရှိတဲ့ မြတ်လေး ကြီး ရဲ့ “ ၁၃၀၀ ပြည့်အောင်ပွဲ ” သီချင်းလေး ကို ခပ်တိုးတိုး ညည်းမိတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ ညကတည်းက ဖေဖေ့ ဆီကို စိတ်ထဲကနေ စာတစောင် ရေးနေခဲ့မိတာ.. ။
“ ဒို့အလုပ်သမားတွေ ဒို့လယ်သမားတွေ စုရုံးပေါင်းစည်းလို့ ညီ. . . မြေရှင် ဓနရှင် အရင်းရှင်များကို အမြစ်ပါနှုတ်ပစ်မည် . . .လူတန်းစေ့ အခွင့်အရေး မရသမျှအတည်
(ရအောင်)၂ အရိုးကြေကြေ အရည်ခမ်းခမ်း မသွေတမ်း တိုက်ထုတ် မောင်းနှင်မည်. . .”
ဖွင့်ပွဲညက စတော့၊ မြန်မာဆန်ဆန် ပုဝါတွေ အချိတ်တွေ ဆင်ယင်ထားတဲ့ မြန်မာဧည့်သည် သုံးယောက်ဟာ ၊ တီရှပ်အနီ ခေါင်းစည်းအနီတွေ စည်းထားတဲ့ လူအုပ်စုထဲမှာ အထင်းသား ဖြစ်နေတော့တယ်။ ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ မြန်မာပြည်က သမဂ္ဂအရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ သုံးယောက်က ၊ သူတို့ တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမူတွေ နဲ့ ကျခံခဲ့ဘူးတဲ့ ထောင်ဒဏ် အသီးသီးကို ထွက်မိတ်ဆက်တဲ့ အချိန်မှာ ၊ တခန်းလုံးက ပရိသတ် တွေ မတ်တပ်ထပြီး လက်ခုပ်သြဘာပေးလိုက်ကြတာ တချို့ဆို မျက်ရည်တောင် ကျနေတာ တွေ့မိတယ်။ အနှစ် ၇၀ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံ ခဲ့ရဘူးတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ မမာမာဦး နားကို လူတွေ ၀ိုင်းလာပြီး လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ တောင်ကိုရီးယား သမဂ္ဂက လူတွေက သူတို့ ဘာသာစကားနဲ့ ရေးထားတဲ့ ခေါင်းစည်း အနီကို လာစည်းပေးတော့ ၊ မမာမာဦး တယောက် တော်လှန်ရေးနတ် ပူးသွားတယ် ထင်ရဲ့ . . . သြစတြေလျ သမဂ္ဂ၀င် အမျိုးသမီးကြီးတွေ သမဂ္ဂသီချင်း သံပြိုင် သီဆို ဖျော်ဖြေတဲ့ အရှေ့မှာ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ၊ က တော့တာပါပဲ ။
ဒီပွဲမှာ လူအင်အား အများဆုံးနဲ့ အတက်ကြွဆုံး ပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ အဖွဲ့တွေကတော့ ၊ တောင်အာဖရိက နဲ့ ကိုရီးယားတွေပဲ ။ တောင်အာဖရိကက အုပ်စုတွေကို အာဏာရ ANC ပါတီကြီးရဲ့ မဟာမိတ် ၊ ကိုဆားတူ လို့ ခေါ်တဲ့ Congress of South African Trade Unions ( COSATU) တပ်ပေါင်းစု သမဂ္ဂကြီးက ဦးဆောင်လာသလို ၊ ကုိုရီးယားအုပ် ကိုလည်း တောင်ကိုရီးယား ရဲ့ တပ်ပေါင်းစု သမဂ္ဂ တခု ဖြစ်တဲ့ Korean Confederation of Trade Unions( KCTU) ကနေ ဦးဆောင်လာတယ်။ တောင်အာဖရိက သားတွေက မကြခဏ ထ ဆွေးနွေးတတ်ကြ သလို ၊ တယောက်ကို တယောက် Comrade လို့ ခေါ်ဝေါ်ညွှန်းဆိုကြပုံကိုက သူတို့ ဟန်ပန်ကြီးတွေလိုပဲ အားရပါးရ ရှိလွန်းလှတယ်။ ကိုရီးယားတွေ အင်အားတောင့်ပုံ တက်ကြွပုံကတော့ ၊ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေ လေး-ငါး-ခြောက်ယောက်မှာ စကားပြန်တွေကလည်း တယောက်စီလောက်နီးနီး ။ ညဖက် တွေမှာတောင် စခန်းတခုလုံးကို ဂစ်တာတွေနဲ့ တော်လှန်ရေး သီချင်းတွေ သီဆို ဖျော်ဖြေကြသေးတာ ။ ကျန်တဲ့သူတွေကပါ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းစည်းနီတွေ စည်းပြီး သူတို့ အော်သလို ကြွေးကြော်သံတွေ လိုက်အော်ပေးကြရတယ်။ ပြုံးချင်စရာတခုက၊ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ရိုးရိုး ကြွေးကြော်ရယုံတင် မကဘူး . . . သူတို့တွေ ထိုင်သပိတ်လုပ်တဲ့အခါ ၊ လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သလိုမျိုး နည်းတခုကိုလည်း သင်ပေးသေးတယ် ။ လက်သီး နှစ်လုံး ကို ကျစ်ကျစ်ဆုပ်ထား ။ တဖက် လက်သီးထဲမှာက အစိုးရ ၊ နောက်လက်သီးထဲမှာက ကော်ပုိုရေးရှင်းကြီးတွေ တဲ့ ။ ပြီးရင် အဲဒီလက်သီး ၂လုံးကို အလယ်ခေါင်မှာ ခွပ်ကနဲ နေအောင်ခွဲ ၊ ပြီးမှ ခပ်ဝေးဝေးကို လွှတ်ပစ်တဲ့ ဟန် လုပ်ရတယ်။ ကိုရီးယား ဆိုတာတွေကို မြန်မာပြည်မှာတော့ အလုပ်သမားတွေကို ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ စက်ရုံပိုင်ရှင် တွေ အဖြစ်နဲ့သာ သိထားကြတာမို့ ၊ မမာမာဦး ကတော့ အဲဒီ ကိစ္စကိုသာ မေးကြည့်ချင်နေခဲ့တယ်။ အကျအန စက်မူ ထွန်းကားပြီး ဖြစ်နေတဲ့ သူတို့ နိုင်ငံက အလုပ်သမား ဆိုတာတွေကလည်း ၊ ကားစက်ရုံတွေ အီလက်ထရောနစ် စက်ရုံတွေလိုမျိုး တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန် ၀န်ထမ်းတွေမို့ ၊ အနည်း နဲ့ အများတော့ ပညာတတ်တွေ ဖြစ်ကြပုံပဲ။ မအိရွှေစင် ကတောင် သူတို့ ကြည့်ရတာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂ ထက် အလုပ်ရှင် သမဂ္ဂနဲ့ ပိုတူနေတယ်လို့ နောက်နေသေးတယ်။ သူတို့ တင်ပြတဲ့ အထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ တော်တော်ကောင်းတာက ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Ssang Yong Motor လို့ ခေါ်တဲ့ ကားစက်ရုံကြီး တခုက ၀န်ထမ်းတွေကို ထောင်နဲ့ ချီပြီး လျော့ချ ပြစ်လိုက်လို့ ၅၉ ရက်ကြာအောင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ အကြီးဆုံး အလုပ်သမားသပိတ်တိုက်ပွဲ ကြီး အကြောင်းပဲ ။ အဲဒီတုန်းက အစိုးရက ရဟတ်ယဉ်တွေတောင် သုံးဖြိုခွင်းခဲ့ရပြီး ဆန္ဒပြသူ အလုပ်သမားပေါင်း ၂၄ ယောက် သေဆုံးခဲ့ရသတဲ့ ။ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက အခုလို လေးနှစ်လောက် ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီ အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အလုပ်သမားတွေခမျာ သူတို့ တောင်းဆိုချက်တွေထဲက တခု တလေ လောက်ပဲ ရရင်တောင် ကျေနပ်ရမဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေတော့တာပဲ ။
အစည်းအဝေးကြီးရဲ့ တတိယမြောက်နေ့မှာတော့ ခေါင်းစဉ်လေးခုနဲ့ အုပ်စုတွေ ခွဲပြီး ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ အခန်းမှာ သွားနားထောင်ကြရတယ်။ သမီးက TNC ( Transnational Corporations) အကြောင်း ဆွေးနွေးတဲ့ အခန်းကို သွားလိုက်တယ်။ နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းစုကြီး တွေရဲ့ အကြောင်းဆိုပါတော့ ။ တောင်အာဖရိကက လူတယောက်က သူတို့ဆီက Wal-Mart ရဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်မူ တွေ ကို ပြောတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်က တယောက်ကတော့ Nestle ကုမ္ဗဏီကြီး မှာ သောင်းနဲ့ ချီတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ အတွက် ပင်စင်ခံစားခွင့် မပေးတာကို ဆွေးနွေးတယ်။ Blood coffee လို့ တောင် ကန်ပိန်း လုပ်ခဲ့ကြ ပေမဲ့ မအောင်မြင်ဘူး – လို့ ဆိုတော့ ၊ သမီး စိတ်ထဲ ဒီကွန်ဖရန့်ရဲ့ ထမင်းစားဆောင်ထဲ ခု သွားကြည့်ရင် တောင် Nestle တံဆိပ်နဲ့ နို့တွေ ကော်ဖီတွေ ချောကလက်တွေ ရှိနေမှာလေလို့ စိတ်ထဲက ပြောနေမိတယ်။ တဆက်တည်းပဲ ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူတယောက်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာရော Wal-Mart က ၀ယ်တဲ့ တရုတ်ပြည်လုပ် ပေါချောင်ကောင်း ရှပ်အကျီ င်္လေး တထည်လောက်များ ရှိမနေဘူးလား လို့ အတွေး ဝေ့၀ဲ ကြည့်မိပြန်တယ်။ ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ တခြားလူတွေထဲမှာရော . . . သြစတြေလျနိုင်ငံ ရဲ့ လက်ရှိအစိုးရတင်မက အတိုက်အခံ အလုပ်သမားပါတီ ကပါ ပွေ့ပိုက် ကျင့်သုံးနေတဲ့ Neoliberalism ရဲ့ အခက်အလက်တွေ ဖြစ်တဲ့၊ စတော့ ရှယ်ယာ ငွေကြေးဈေးကွက်တွေမှာ မကစားဘူးတဲ့သူ ဘယ်နှယ်ယောက်လောက်များ ရှိပါ့မလည်း လို့ သံသယ၀င် နေမိတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ဘဏ်တိုက်ကြီးတွေက ထုတ်ချေးထားတဲ့ အိမ်ချေးငွေ (Mortgage) တွေနဲ့ ဘယ်သူမှ ကင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
အားလုံး ခုံမှာ ပြန်ထိုင်ကြတော့မှ ၊ ရှေ့မှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အနီရောင် နောက်ခံ ကားချပ်ပေါ်က၊ ကမ္ဘာလုံးထဲမှာ လက်သီးလက်မောင်းတန်းနေတဲ့ ရုပ်ပုံအောက်က New Unions foraSolidarity ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို၊ အခုမှ မြင်မိသလို ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ဓနရှင်လက်သစ်ဝါဒကို အစားထိုးဖို့ ဆိုတဲ့ ၊ ဒီအစည်းအဝေးကြီးရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်မြောက်ပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုရင်း ၊ လက်သစ်ဝါဒ နောက်ထပ်တမျိုးကိုလည်း အဆိုးမမြင်ချင်တော့ဘူးလို့ တွေးမိတယ်။ အားလုံးအတွက် တရားမျှတ တဲ့ လူ့ဘောင်ကြီးတခု တည်ဆောက်ဖို့ ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ် သက်သက်တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး နော် . . . ဖေဖေ ။
၂၀ – ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃
ကေသွယ် – သူ့ ဦးဏှောက်ထဲက ဖိနပ်. . . သူ့ခန္ဓာကိုယ် ထဲက အပ် (0)